1989 – Year – Alpha Premium
Born on the Fourth of July (1989) (App member only) ##unicode အခု တင်ဆက်ပေးမဲ့ဇာတ်ကားကတော့ 1989 ထွက် Rating 7.2/ Rotten Tomatoes 85% ရရှိခဲ့တဲ့ War/Anti-war အမျိုးအစား ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့ " Born on the Fourth of July " ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ဒီဇာတ်ကားကတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက နိုင်ငံ့တာဝန်ကို အသက်စွန့်ကာ ရဲရဲရင့်ရင့် ထမ်းဆောင်ချင်လိုစိတ် ပြင်းပြခဲ့သူ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်လေး ရွန်ကိုဗစ်ခ်အကြောင်းကို သူဝင်နွှဲခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲကတစ်ဆင့် မီးမောင်းထိုး ရိုက်ကူးပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားခေါင်းစီးကတော့ အမေကန်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဇာတ်လမ်းထဲက ရွန်ကိုဗစ်ခ်ကိုလည်း ဒီရက်မှာပဲ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက သူငယ်ချင်းအပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ စစ်တိုက်တမ်းကစားတတ်တဲ့ရွန်နီ။ သူ့အတွက်ဆို အမြဲဦးစားပေးကာ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နေတတ်တဲ့ သူချစ်ရတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းမ‌လေး ဒါနာ။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လမ်းတွေ တစ်လမ်းစီခြားနားခဲ့ကြတယ်။ ရွန်နီက စစ်ထဲဝင်ဖို့ သူ့မိဘတွေကို ပြောပြခဲ့တယ်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကို ...
IMDB: 7.2/10 104,295 votes
The Punisher (1989) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ Marvel's Netflix series ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Punisher ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Marvel series ဆိုပေမယ့် ဒီကားက superhero အကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး သာမန်ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက် အကြောင်းပါ ဖရန့်ခ်ကာဆယ်လ်ဆိုတဲ့ FBI အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဟာ သူ့မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်သွားတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေကို လိုက်လံရှာဖွေလက်စားချေရင်းလောက ကြီးမှာလူတွေကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေကို ချေမှုန်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် သူ့ကိုယ်သူ မကောင်းတဲ့သူတွေ ကိုအပြစ်ပေးသူ Punisher အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုသုတ်သင်နေပါတော့တယ် Punisher ဟာ superheroဇာတ်ကောင်မဟုတ်ပေမယ့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အက်ရှင်ဇာတ်ကားကြမ်းကြမ်းကိုမှ ကြိုက်တဲ့သူတွေ သဘောတွေ့စေမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Marvel's Netflix series ထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ The Punisher ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားေလးကို တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ Marvel series ဆိုေပမယ့္ ဒီကားက superhero အေၾကာင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး သာမန္ရဲဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းပါ ဖရန႔္ခ္ကာဆယ္လ္ဆိုတဲ့ FBI ေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔မိန္းမနဲ႔ ကေလးေတြကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္သြားတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ္းေတြကို လိုက္လံရွာေဖြလက္စားေခ်ရင္းေလာက ႀကီးမွာလူေတြကို ဒုကၡေပးေနတဲ့သူေတြကို ေခ်မႈန္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ သူ႔ကိုယ္သူ မေကာင္းတဲ့သူေတြ ကိုအျပစ္ေပးသူ Punisher အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး လူဆိုးဂိုဏ္းတစ္ခုၿပီးတစ္ခုကိုသုတ္သင္ေနပါေတာ့တယ္ Punisher ဟာ superheroဇာတ္ေကာင္မဟုတ္ေပမယ့္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔လက္ေတြ႕က်တဲ့ဇာတ္ေကာင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ အက္ရွင္ဇာတ္ကားၾကမ္းၾကမ္းကိုမွ ႀကိဳက္တဲ့သူေတြ သေဘာေတြ႕ေစမယ့္ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားလည္း ျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File ...
IMDB: 5.7/10 21,689 votes
Glory (1989) ဇာတ်လမ်းနာမည် ဂလိုရီ ဆိုတာကတော့ ဂုဏ်ကျက်သရေရှိတဲ့ အောင်မြင်မှုလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်တွင်းစစ် ကာလက တိုက်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းကို ရိုက်ကူးပြသထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမည်းတွေ ကျွန်ဘဝက ကင်းလွတ်ခွင့်အမိန့်ကို သမ္မတ လင်ကွန်းက ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ပထမဆုံး လူမည်း တပ်ရင်းတစ်ခု ဖွဲ့စည်းခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ မက်ဆာချူးဆက် တပ်ရင်း (၅၄) ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လူဖြူစစ်သားတွေကလည်း လူမည်းတွေကိုအထင်မကြီးသလို လက်ထဲကို သေနတ်အပ်ဖို့လည်း မယုံကြည်နိုင်သေးပါဘူး။ ပိုဆိုးသွားတာက တောင်ပိုင်းစစ်တပ်က မြောက်ပိုင်းက ဝင်တိုက်တဲ့ လူမည်းမှန်သမျှ သေဒဏ်ပေးမယ်လို့ ကြေညာစာတမ်း ထုတ်လိုက်တာပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ တပ်ရင်းမှူး က ထွက်လိုက ထွက်နိုင်ပြီလို့ ကြေညာခဲ့ပေမယ့် တစ်ယောက်မှ လျော့မသွားခဲ့တဲ့ တပ်ရင်းပါ။ ဒါပေမယ့် တပ်ရင်းတစ်ခုလုံးက စစ်မတိုက်ရသလို ဗြူဟာမှူးကိုယ်တိုင်က အလုပ်ကြမ်းတွေပဲ ခိုင်းထားပြီး နှိမ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို မခံနိုင်တဲ့ တပ်ရင်းမှူးက နောက်ဆုံးမှာ ...
IMDB: 7.8/10 118,788 votes
Bill & Ted’s Excellent Adventure Bill & Ted’s Excellent Adventure(1989) ဘီလ္နဲ႕တက္ဒ္ ဆုိတဲ့ သူငယ္ခ်င္း (၂)ေယာက္ဟာ ဂစ္တာကုိရူးသြပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသလုိ ေအာင္ျမင္တဲ့ တီး၀ုိင္းတစ္ခုျဖစ္ဖုိ႕ႀကဳိးစားေနတဲ့လူငယ္ေတြ…. သုိ႕ေပမယ့္ သူတုိ႕၂ေယာက္ဟာ အေကာင္းမြန္ဆုံးလမ္းညႊန္ေပးတဲ့သူမရွိလုိ႕ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ေနတဲ့ပုံေပါက္ေနတယ္… ဂစ္တာဘက္ကုိရူးသြပ္လြန္းၿပီး ေက်ာင္းစာမွာေတာ့ စာေမးပြဲတုိင္းကုိ တဘုန္းဘုန္းက်ေနတယ္… ဒီလုိက်ဆုံးျခင္းဟာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေက်ာင္းကေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕ သတိေပးျခင္းတစ္ရပ္ထုတ္လုိက္တယ္… ေနာက္ဆုံးစာတမ္းတစ္ခုကုိ A+မွမရရင္ ေက်ာင္းက ထာ၀ရနားရေတာ့မယ္ဆုိတာပါပဲ… တက္ဒ္အတြက္ ေက်ာင္းနားရရင္ စစ္ေက်ာင္းကုိသြားရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ သူတုိ႕ရူးသြပ္တဲ့ တီး၀ုိင္းလည္းဘယ္ေတာ့မွျဖစ္လာေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး… ဘီလ္လည္းထုိ႕အတူပါပဲ…. ဒီကားက သူငယ္ခ်င္း ၂ေယာက္ရဲ႕ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြနဲ႕ ရယ္ေမာရသလုိ ဇာတ္လမ္းကလည္းစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္… သူတုိ႕ ၂ေယာက္ရဲ႕ မွားယြင္းေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိတည့္မတ္ေပးဖုိ႕ လက္ရွိ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ကုိ ၂၆၈၈ခုႏွစ္ကေန အခ်ိန္ခရီးသြားၿပီး လာေရာက္ကူညီတာေတြပါလုိ႕ပါ… ဘယ္လုိေတြ တလြဲလုပ္ၾကမလဲ.. သူတုိ႕စာေမးပြဲေအာင္ၿပီး ေက်ာင္းဆက္တက္ႏုိင္မလား… ေအာင္ျမင္တဲ့တီး၀ုိင္းတစ္ခုဆက္ဖန္တီးႏုိင္မလား… ၂၆၈၈ခုႏွစ္က သူေတြကလည္း အခ်ိန္ခရီးသြားၿပီး ဘာေၾကာင့္လာကူညီၾကတာလဲ. အခ်ိန္ခရီးသြားတဲ့သူေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ ဒီ ၂ေယာက္ဘာေတြဆက္ဗရုတ္က်မလဲ .ခံစားၾကည့္ၾကပါ… ကြ်န္ေတာ္တုိ႕လည္း ၁၉၈၈ခုႏွစ္က ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိတဲ့ Keanu Reeves ရဲ႕ဇာတ္ကားေကာင္းကုိ အခ်ိန္ခရီးသြားျခင္းပုံစံတစ္မ်ဳိးနဲ႕ခံစားၾကည့္လုိက္ရေအာင္
IMDB: 6.9/10 108,327 votes
IMDB: 7.6/10 158,749 votes
Just Heroes Just heros (1989) ဒီကားဟာ Stephen Chowရဲ့ အစောဆုံးဇာတ်ကားလို့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ သူ့ရှေ့မှာ Final Justic တို့ Faithfully Yoursတို့မှ Main Actorအဖြစ် ပါ၀င်ခဲ့ဖူးပြီးပါပြီ။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ Supporting Actor အနေနဲ့ပဲပါ၀င်ပါတယ်။ ဂန္တ၀င်မင်းသားကြီး Danny Lee ဦးဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ John Wooနှင့် Wu Maတို့ပူးပေါင်း ရိုက်ကူးထားသော်လည်း ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ ၆၀ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့John Woo ကဦးစီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို ဟောင်ကောင်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေအတွက် ရည်ရွယ်ရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့် ရလာတဲ့ Box Office က ၇မီလီယံသာရရှိတာမို့ ပရိုဂျူဆာက နောက်ရုပ်ရှင်အတွက်သာထည့်သုံး လိုက် ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဟာ 1989တနှစ်တာ Box office စာရင်းမှာ အဆင့် ၄၈ နေရာ ၌ သာ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ___________ ဟောင်ကောင်မှာ မာဖီးယား‌ေတွ အုပ်စိုးစဉ်ကပေါ့။ ဂိုဏ်းတိုင်းက လေးစားရတဲ့ မာဖီးယား ...
IMDB: 6.5/10 832 votes